China MJ-1430 Log ezininzi wabona umatshini mveliso kunye nabenzi | IRuima
TAHA wabona blade for Acrylic
I-MTL Saw blade ye-Wood SKS-51 ye-Plate ye-Alloy Isixhobo ...
I-MTL yabona iblade yokusika iBhodi yeCalcium e-Silicate Sp ephezulu ...
I-MTL Saw blade yeAluminium yokusika isarha blade
I-DIMAR blade yokucheba iinkuni
I-MJ-4003 i-spindle eyodwa yomatshini wesarha omninzi
I-MJ-2030 Itafile yokutya yokujikeleza ngokujikeleza
MJ-1430 Log umatshini wabona ezininzi
I-MJ-3016 Plank umatshini weesar ezininzi
DJ-230J Pedal Isakhelo Angle Umatshini wokudibanisa
QJ-200 Photo Isakhelo Angle Cutting Machine
Umatshini wokusika iinkuni ogqibeleleyo ukukunceda ukuba ugqibezele inkqubo yokutya yesakhelo esineenkcukacha + kunye nokuhambisa ngokuhambisa, ukomelela okuzinzileyo nokuzinzileyo, wabona ukhuni kakuhle.
Lo matshini we-saw multiple uyilo loomatshini abasindayo. Isetyenziselwa ukusika iinkuni ezahlukahlukeneyo ezomeleleyo, ezinje nge-China fir, metasequoia, ipine, ispotch spine pine, umthi we-chestnut, ipoplar, i-beech, i-acacia.
I-shaft ibuyiselwe emva ukutshiza amanzi, inani elincinci lamanzi ukufezekisa eyona nto ipholileyo yokupholisa isarha; Ixesha eliyilelwe ngokukodwa, ukongezwa kobungakanani bamanzi, hayi kuphela ukupholisa ikhaba kunye nokugcina isarust ayimanzi kakhulu.
Indawo yokondla ixhotyiswe ngesixhobo somda wokuphakama. Xa udlula uluhlu oluvumelekileyo, ukondla kuya kuyeka ngokwakho.
Uzinzo High kunye nokhuseleko elungileyo
Ukulinganiswa kwe-infrared, ukuchaneka okuphezulu kwezinto zokusika
Ukunikela isakhiwo amanzi lungapholi: Iya ukugcina blade isarha kunye lobushushu aphantsi kunye nobomi inkonzo ende.
Ukondla ngokutya amandla ngokupheleleyo: Gcina ezothutho zisebenze ngokutyibilikayo kunye nokusebenza kukusebenza okuphezulu.
Amaqhosha alula ngokulula
Ukuxhotyiswa ngesixhobo sokhuseleko se-elektroniki esenziweyo, isondlo sokumisa esizenzekelayo xa umthwalo omkhulu emotweni;
Imoto ephindwe kabini inika amandla aneleyo okwenza ukusika kakuhle!
Umatshini wokuqala uxhotyiswe nge-8 * 2 blade blades kwaye uthelekise kunye neesarha zokuhamba.
Log Log umatshini saw ezininzi
ΦUbukhulu: 150 ~ 290mm
Min. Ubude bokusebenza
Ubukhulu yokuluka Main
Othini Main (phezulu)
Othini Main (ezantsi)
Ubone iblade spec.
Ukuxhotyiswa iincakuba iincakuba
Egqithileyo I-MJ-3016 Plank umatshini weesar ezininzi
Okulandelayo: I-MJ-2030 Itafile yokutya yokujikeleza ngokujikeleza
14 Inch Cutting Matshini
Yenza iCold Saw
Isikhokelo Sokusika Umatshini
Encinci Saw Machine
Umatshini obonayo wodonga